အေအေ ဖမ်းသွားတဲ့ မီးသတ်သမား ၁၉ ဦးထဲက တစ်ဦး လမ်းမှာ အမောဖောက် သေဆုံး
အေအေ ဖမ်းသွားတဲ့ မီးသတ်သမား ၁၉ ဦးထဲက တစ်ဦး လမ်းမှာ...
9 พ.ย. 2562 - 00:46 น.
မြောက်ဦးမြို့နားမှာ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့တုန်းက ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်ကနေ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေရဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ခံခဲ့ရတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးထဲက စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး ရခိုင်ပြည်နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံးကို ပြန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ မီဒီယာတချို့မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီ ၁၉ ဦးထဲက မီးသတ် ဒုဦးစီးမှူး ဦးမြင့်ဇော် ကတော့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် လမ်းမှာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အေအေ ပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ မီးသတ် ဒုဦးစီးမှူး ဘာ့ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာ သိရဖို့ အေအေပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ခိုင်သုခ - မီးသတ်သမား ၁၉ ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ စပြီးတော့ ခေါ်လာတဲ့ နေ့တုန်းက မီးသတ် ဒုဦးစီးမှူးပေါ့နော်၊ သူကတော့ လမ်းမှာ တောင်တစ်လုံးကို ကျော်တဲ့အချိန် တောင်မှာ ရောက်တဲ့အခါကျတော့ သူက ရေသောက်လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆိုတော့ ရေသောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ချက်ချင်း သူ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ သေသွားတာ၊ သူက အဲလိုမျိုး ရုတ်တရက်ကြီး ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း အများကြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ဘီဘီစီ - အဲဒီအခါကျတော့ သေဆုံးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ကားပေါ်ကနေ ခေါ်လာတဲ့ ညတွင်းချင်းမှာ အဲလိုမျိုး အသက် ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့။
ခိုင်သုခ - ဟုတ်တယ်၊ ကားနဲ့ ခေါ်လာအပြီး နာရီပိုင်းမှာပဲ ဖြစ်တာ၊ အဲဒီ ပြဿနာက။
ဘီဘီစီ - အဲဒီတော့ သူ့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းက အခုဘယ်မှာလဲ။
ခိုင်သုခ - သူ့ကိုတော့ အဲဒီနေရာမှာပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သင်္ဂြိုဟ်လိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
ဘီဘီစီ - အခုလတ်တလော အဖြစ်အပျက်တွေ အတွင်းမှာပဲ အေအေ ကဖမ်းသွားတဲ့ အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင် ၅ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်လည်း အသက် ဆုံးရှုံးတယ်။ အခု မီးသတ်အရာရှိတစ်ယောက်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အေအေရဲ့ လက်ထဲမှာ ခုလိုမျိုး ထိန်းသိမ်းထားတုန်းမှာ အသက်သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတော့ အေအေအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆမိလား။
ခိုင်သုခ - အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး ဒါ စနစ်တကျကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ရှိတယ်။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ ဘာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ ဘယ်လို ဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။
ဘီဘီစီ - စထိန်းသိမ်းကတည်းက မီးသတ်သမားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါလား။
ခိုင်သုခ - ဒီဟာက ဒီလိုရှိတယ် ခင်ဗျ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စစ်တပ်က သူတို့ရဲ့ တပ်တွေ ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါ သွားလာတဲ့အခါ မီးသတ်ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ အသုံးပြုပြီး သွားနေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သတင်းတွေ ရထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းတာ ဖြစ်တယ်။
ဘီဘီစီ - ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ အခုလိုမျိုး သေဆုံးခဲ့မှုက နှစ်ကြိမ် ဆက်တိုက် ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာရော ဒီလိုမျိုး လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ အခုဒီသေဆုံးခဲ့မှုတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမလား။
ခိုင်သုခ - ကျွန်တော်တို့က အခုဆိုရင် အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဥပမာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိန်းသိမ်းမယ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအနေအထား၊ ခန္ဓာ အနေအထား၊ ဒီလူရဲ့ အနေအထားတွေပေါ့နော်၊ ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်းမှာ ထည့်တွက်စရာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။
อัลบั้มภาพ အေအေ ဖမ်းသွားတဲ့ မီးသတ်သမား ၁၉ ဦးထဲက တစ်ဦး လမ်းမှာ အမောဖောက် သေဆုံး